VaMpofu Vanoti Nyika Ichasimudzirwa neMangoda ekwaMarange
Mbudzi 03, 2011
Gurukota rezvemigodhi, VaObert Mpofu, neChitatu vakati Zimbabwe haichazofi yakatambura zvakare munyaya dzeupfumi, zvichitevera danho rakatorwa nesangano rinoongorora kutengeswa kwemangoda pasi rose, reKimberley Process Certification, rekuibvumidza kuti itengese mangoda ayo ekwaMarange pasina anoiongorora.
VaMpofu vakaudza vatori venhau kuti Zimbabwe yakanga yochitupfunyura zvairi kuti pasi rose rione, sezvo ichange yotungamira munyaya dzekumuka kweupfumi hwenyika kuburikidza nekutengeswa kwemangoda. VaMpofu vanoti Zimbabwe ichange ichiwana mari inodarika mabhiriyoni maviri emadhora gore rogaroga kubva kumangoda.
Asi nyaya yekupiwa mvumo kweZimbabwe haina kutambirwa nevanhu vese, sezvo masangano akazvimirira aive kumusangano uyu kuKinshasa, DRC, akaramwa kupinda mumusangano wakapa Zimbabwe mvumo uyu, achiti KP yakanga yakundikana kutevera zvinangwa zvayo panyaya yeZimbabwe.
Ukuwo, nhengo yeBulawayo South mudare reparamende, VaEddie Cross, veMDC-T, vakakwidzawo mudare chikumbiro chekuti mangoda ekwaMarange ange ari pasi pehurumende kwete kuti vanhu vashoma munyika vange vari ivo vari kudya vachiguda vega.
Ukuwo gurukota rezvemari, VaTendai Biti, vanoti hapana hurongwa hwakajeka pamangoda ari kutengeswa kuitira kuti hurumende iwane payo kubva pamari dziri kubva mumangoda anenge atengeswa.
Nyanzvi mune zveupfumi, uye vari Executive Director weEmployers Confederation of Zimbabwe, VaJohn Mufukare, vanoti vanotambira danho reKP iri sezvo paine tarisiro yekuti kana zvinhu zvose zvakaiswa pachena budiriro yenyika inokasika kuonekwa.
Nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachishanda vakazvimirira, VaCharles Mangongera, vanotiwo danho rakatorwa neKimberley Process Certification iri harina zvikuru zvarinoshandura kana mangoda ekwaMarange akaramba ari pasi pemakambani akazvimirira, sezvo paine kutyirwa kuti makambani aya haasi kutaura chokwadi pamusoro pehuwandu hwemangoda aanowana achitengesa.
Hurukuro naVaJohn Mufukare pamwe naVaCharles Mangongera